Himalaya Dainik » अन्तर्वार्तामा आलियाको बोलि चिप्लिएर अश्चिल बनेपछि…(भिडियोसहित)
अन्तर्वार्तामा आलियाको बोलि चिप्लिएर अश्चिल बनेपछि…(भिडियोसहित)
बलिउड चर्चित अभिनेत्री आलिया भट्टलाई धेरैले नसोचिकन बोल्ने नायिकाको उपमा दिएका छन् । हालै उनीमाथि ठ्याक्कै यस्तै भएको छ । एक कार्यक्रमका बेला आलियाको मुखबाट करिनाको तारिफ गर्दागर्दै अश्ली ल शब्द एफ वर्ड निस्कियो ।
‘करिनाले एकपछि अर्को फिल्ममा काम गरिरहेकी छिन् । मानिसहरु भन्छन् कि विवाह भएपछि जीवन थोरै स्लो हुन्छ तर करिनाको यस्तो भएन । कतिले बच्चा भएपछि जीवन स्लो हुन्छ पनि भन्छन् तर उनको यस्तो पनि भएन । उनी सधैंझैँ हाम्रो लागि प्रेरणा बनेकी छिन् । मेरोलागि मात्र होइन मेरा साथीहरुका लागि पनि ।’
यसो त नेपालमा पनि प्रियंका कार्कीलगायतका नायिकाहरुको मूखबाट पनि बोल्दा बोल्दै अश्लि शब्दहरु निस्किनै रहन्छन् । यस्तै आलियाले पनि एक अन्तर्वार्तामा करिनाको लागि केही शब्द बोल्दा बोल्दै अश्लिल शब्द बोल्न पुगिन् । आलिया केही दिन अघि करिना कपुर खान र करण जोहरसँग जियो मामी फिल्म फेस्टिबलमा समावेश भइन् ।
यतिबेला करणसँगको कुराकानीमा एक प्रश्नको जवाफमा आलियाले करिनाको तारिफ गर्न सुरु गरिन् । आलियाले भनिन्, ‘करिनाले एकपछि अर्को फिल्ममा काम गरिरहेकी छिन् । मानिसहरु भन्छन् कि विवाह भएपछि जीवन थोरै स्लो हुन्छ तर करिनाको यस्तो भएन । कतिले बच्चा भएपछि जीवन स्लो हुन्छ पनि भन्छन् तर उनको यस्तो पनि भएन । उनी सधैंझैँ हाम्रो लागि प्रेरणा बनेकी छिन् । मेरोलागि मात्र होइन मेरा साथीहरुका लागि पनि ।’
आलियाले थपिन्, ‘हामी सधैं उनको तस्बिर हेर्‍छौं र उनको जिम लुकको तारिफ गर्छौं । हामी सोच्छौं कि उनी कति हट छिन् । उनी कहिले यति सुन्दर र हट देखिन बन्द गर्छिन् ? यहाँसम्म कि उनी ट्र्याक वा चप्पल र टिसर्टमा पनि उत्कृष्ट देखिन्छिन् ।’
यति भन्दा भन्दै आलियाको मुखबाट अश्लील शब्द निस्कन्छ जुन सुनेर करिनाले आफ्नो हात मुखमा राख्दै भनिन्, ‘भर्खरै के भयो ?’ करणले पनि दोहोराएर उनले के भनिन् भनेर सोधे ? जब यसबारे थाहा भयो कडा स्वरमा आलियालाई भने, के मैले तिमीलाई यसरी नै हुर्काएँ ?
यो घट ना केही महिना अगाडी एउटा फिल्म फेष्टिभलमा भएको हो । करिना र आलिया मिल्ने अभिनेत्री मध्यकी दुई हुन् । आलिया करिनाको फ्यान समेत हुन् ।